Ambanja: tratran’ny mpanjono ny famotehana ala honko | NewsMada
Tratran’ny Federasiona fikambanan’ny mpanjono any Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava, sy Nosy Be (FUP BATAN)* ny fitrandrahana ala honko anaovana saribao any Anorontsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana, araka ny tatitra navoakan’ny WWF. Voarara hatramin’ny 2014, mbola araraotin’ny maro any amin’iny kaominina lavitra iny ny fitrandrahana ala honko.
Hita mpanao izany ireo mpifindra monina avy any Atsimo sy avy any amin’ny faritra Sofia. Ny volana mey 2020, nangataka alalana amin’ny manam-pahefana ny Federasiona mpanjono hanao fanadihadiana miaraka amin’ny mpanao gazety iray momba ny fandripahana ala honko. Maherin’ny 1000 kitapo ny saribao hamidy hita teny an-toerana, 200 ha mahery ny ala honko potika. Nanaitra ny minisiteran’ny Tontolo iainana ny tatitra nataon’ireo mpanjono ireo tamin’ny haino aman-jery.
Avy hatrany, nandray fepetra ny sampandraharaham-paritra any Diana : 12 ireo mpanao saribao tsy ara-dalàna nampidirina am-ponja ao Ambanja, ny voalohan’ny volana jona teo, voasazy dimy taona an-tranomaizina sy mandoa onitra roa tapitrisa ariary.
Hentitra ny filohan’ny Federasiona mpanjono, Randrianasolo Félix, nilaza fa « tsy mitsahatra ny Fup Batan misahana ny andraikitra tandrify azy ho an’ny fitondrana tsara tantana ny harena voajanahary, anisan’izany ny honko amin’ny faritra Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava, sy Nosy Be. Arahinay maso akaiky ny raharaha, ary manamarina ny fampiharana ny lalàna amin’ireo mihoa-pefy izahay ».
Manaja tanteraka ny lalàna sy manambara ny heloka hitany amin’ny tsy fitandroana ny tontolo iainana ireo mpanjono ireo amin’izao krizy ara-pahasalamana izao. Manampy azy ireo ny firaisaimonim-pirenena any Ambanja.
FUP BATAN* : Fédération des Unions des Pêcheurs de la Baie d’Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava et Nosy-Be.